Euro 2020 : Football pour tous avec StarTimes - ewa.mg
News - Euro 2020 : Football pour tous avec StarTimes
La compétition de football la plus attendue de l’année arrive. L’Euro 2020 débute le 11 juin 2021 et en tant que diffuseur officiel, StarTimes s’est engagé à ce que chaque fan de football d’Afrique puisse profiter pleinement du tournoi.
« Après ce que nous avons traversé, l’Euro 2020 est plus qu’un tournoi de football. Il est le signe que le monde est de nouveau en mesure de célébrer ensemble. Pendant un mois, de l’Afrique à l’Europe, de l’Amérique du Sud à l’Asie, les fans de football vont chanter, pleurer et rire ensemble en regardant ce tournoi palpitant. Cela va être superbe, » explique Philippe Zou, directeur du centre des contenus de StarTimes. « Mais par le passé, les fans africains devaient payer des sommes importantes pour regarder les grandes compétitions. Cette fois, StarTimes lancera des offres spéciales pour garantir que chaque famille africaine puisse prendre part à cette fête du football. »
L’Euro avait dû être repoussé en mars 2020 en raison de l’épidémie de COVID-19 et se déroulera du 11 juin 2021 au 11 juillet 2021 prochain. Il s’agit de la 16e édition de ce tournoi qui verra 24 équipes nationales s’affronter pour le titre de champion d’Europe.
Cet article Euro 2020 : Football pour tous avec StarTimes est apparu en premier sur déliremadagascar.
L’article Euro 2020 : Football pour tous avec StarTimes a été récupéré chez Délire Madagascar.
Nivoaka tamin'ny : 28/05/2021
Mila fanadihadiana… tsy hifampiahiahiana
Vaky ny resaka momba ny sakoroka tao Antsirabe, renivohitry ny faritra Vakinankaratra, farany teo. Mbola mahabe resaka etsy sy eroa. Izay vao nisy fanoherana mivantana ny fanaovana fihibohana amin’izao ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 izao? Fikomiana aza…Inona ny marina? Voalaza ho tsy manaiky ny fampitsaharana ny asa manomboka amin’ny 2 ora tolakandro ny mponina any an-toerana, indrindra ny mpivarotra. Tsy nisy mpitarika, hono, izy ireo fa tonga ho azy amin’izao, lasa ho azy. Niafara ho azy amin’ny fikorontanana sy ny fanakorontanana…Kitoratora-bato izany, fanimban-javatra… Amin’izany, tsy mifidy nasiana fa izay voa any dia voa: mpitandro filaminana, olon-tsotra… Teo koa ny famotehana fananana iombonana, fananan’olona manokana… Kisendrasendra na efa voaomana mialoha? Na hetsika kitoatoa… Mila fanadihadiana.Nahoana, ohatra, no tsy tamin’ny andro mazava eo amin’ny fotoana tsy ahazoana mivarotra mety ho nisian’ny fitangoronana no hoe niseho ho azy ny hetsi-panoherana fa niandry ny andro ho maizina? Tsy mazava be ihany. Misy milaza fa tsy mpivarotra eo an-toerana loatra ireo nihetsika. Iza?Tsy vitan’izay, nisy ny hoe nahita ary sahy nilaza fa toa olona voakarama ireo tena nitarika. Inona ny marina? Mba tsy hisian’ny fifampiahiahiana… Efa ela ary tsy firy ny fisian’ny hetsi-pitakiana na fanoherana midona na miafara amin’ny fanimban-javatra avy hatrany tsy misy dinika na fiala-nenina.Tonga hatramin’ny hoe ny hopitaly fitsaboana ny Covid-19 avy no notetehin’ny sasany. Mba tsy ho vitavita sy tsy hitahita ho azy amin’izao ny raharaha. Misy na asiana ambadika politika? Izay no ilàna fanadihadiana tsy hifampiampangana an-toerana, ifampiandrasana kendry tohina…Eny, na naato aza aloha ny fampiharana ny fepetra nahatonga izany. Mba tsy ho fanapahan-kevitra na didy fakan-tahaka ka hitranga na hatao amin’ny raharaha na faritra hafa. Mba tsy havadika ho misy ambadika politika avokoa izay mitranga sy atao rehetra. Valanaretina no iadiana fa tsy inona…Rafaly Nd. L’article Mila fanadihadiana… tsy hifampiahiahiana a été récupéré chez Newsmada.
“Lalao afrikanina” – Basikety: tafakatra famaranana amin’ny “Shoot Out Contest” i Elly
Mitohy hatrany ny fahombiazana ho an’ny taranja basikety, ao anatin’ny “Lalao afrikanina”, any Maraoka. Tafakatra amin’ny lalao famaranana amin’ny “Shout Out Contest” Randriamampionona Elly, nahafaty baolina miisa enina. Omaly ihany koa no nanatanterahana ny ampahefa-dalana 3×3 izay nahazoan’ny ekipantsika ny tapakila hiakarana amin’ny manasa-dalana, resintsika tamin’ny isa 18 noho 17, tamin’ny alalan’ny fanalavam-potoana, ny ekipan’ny Angola.Vaovao hafaIsan’ny hiaka-tsehatra, anio, ny eo amin’ny taranja karate, ahitana an’i Tanjona (-60kg), i Billy (-67 kg), i Patrick (-75kg), eo amin’ny kata, olon-tokana, ahitana an’i Tsiory ary ny isan-tarika kosa i Mamy, i Mitozo, i Brandon. I Miora izay efa tompondaka an’i Afrika no anisan’ny hitsara mandritra ity fifaninanana ity ary Ratefinjanahary Emile, mpikatroka tao anatin’ny ekipa nasionaly sy mpanazatra nasionaly, kosa ny mpanazatra ireto karateka malagasy ireto. Ankoatra izay, hiakatra an-tsehatra amin’ity faran’ny herinandro ity ihany koa ny atleta malagasy, taranja fibatana fonjamby.Eo amin’ity “Lalao afrikanina” ity hatrany, laharana faha-12 no nisy antsika teo amin’ny tenisy ambony latabatra, taorian’ny faharesena azontsika teo anatrehan’i Kongo, tamin’ny isa 3 no ho 2. Mi.RazL’article “Lalao afrikanina” – Basikety: tafakatra famaranana amin’ny “Shoot Out Contest” i Elly a été récupéré chez Newsmada.
“Mahita izahay fa mampihemotra ny demokrasia ny zavatra toy ireny. Satria tsy ny solombavambahoaka irery no antsoina hoe olom-boafidy eto amin’ny tany sy ny firenena, raha tsy maintsy ao anatin’ny Antenimierampirenena no ahitana ny lehiben’ny mpanohitra.”Io ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe Fanabeazana olom-pirenena, Andriamalazaray Andoniaina, manoloana ny fahalanian’ny tolo-dalàna nanitsiana ny lalàna mifehy ny satan’ny mpanohitra sy ny antoko politika.Afa-manao politika ny olom-pirenena tsirairay avy, afaka manohitra ary mahazo tsy manao solombavambahoaka fa mirotsaka ho ben’ny Tanàna, ohatra. Tsy mety ve izany? Tsy hoe tsy mankasitraka ny hoe tsy maintsy olom-boafidy no lehiben’ny mpanohitra ry zareo, fa ny hoe tsy maintsy solombavambahoaka ny lehiben’ny mpanohitra. Ny olana: mifantoka amina olon-tokana ny adihevitra ny amin’ny fanoherana.Mila miaraka ny ara-dalàna sy ny ara-drariny Koa ahoana raha mirotsa-kofidina, ohatra, ny olona, mety manohintohina ny besinimaro? Tsy mirotsa-kofidina izy, nefa mahazaka vahoaka maromaro ihany ary mijoro ho mpanohitra. Tsy mirotsa-kofidina any amin’ny sehatra hafa izay mety hahalany azy izy amin’izany: voafidy raha mirotsaka ho solombavambahoaka, ohatra. Tsy mahaliana azy ny amin’izany fa ny hofidina ho filohan’ny Repoblika, ohatra, no tiany. Koa rehefa tsy voafidy amin’izany izy dia hanohitra ny filohan’ny Repoblika: hosakanana ve izany izay zony izay?Ny tsy tokony hohadinoina: aiza ho aiza i Madagasikara amin’ny hoe ara-dalàna sy ny fampiharana izay ara-dalàna izay, antsoina hoe ara-drariny? Raha vao tsy miaraka ny ara-dalàna sy ny ara-drariny, azo amboarina amin’izay tiana hanaovana azy ny lalàna. Saingy tsy atao mahagaga raha tsy mifampitohy araka ny tokony ho izy izay ara-dalàna sy ara-drariny izay.R.Nd. L’article Andriamalazaray Andoniaina: “Mampihemotra ny demokrasia ny satan’ny mpanohitra” a été récupéré chez Newsmada.
Fibatana fonjamby: medaly volamena valo ho an’ny Malagasy
Nikiry hatramin’ny farany, medaly volamena valo avy hatrany no indray norombahin’ny mpibata fonjamby malagasy nandritra ny fiatrehan’izy ireo ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika tany Nairobi, Kenya, nanomboka ny 27 mey lasa teo. Tsy nitsanga-menatra, anisan’ny nitondra avo ny voninahi-pirenena teo amin’ny sehatry ny fibatana fonjamby indray ireo atleta efatra mianadahy ka samy nandrombaka medaly volamena telo avy Randafiarison Rosina (-45kg) sy Andriatsitohaina Tojo (-67kg). Medaly volamena miisa roa sy volafotsy iray kosa no azon-dRamiaramanana Ricardo (-55 kg) ary medaly alimo telo ho an’ Andriatsitohaina Eric (-57kg). Marihina fa tara fahatongavana tany an-toerana ny atleta malagasy, saingy nikiry hatrany ary izao nitondra vokatra goavana izao. Mifarana anio ny fifaninanana izay natao tany Nairobi.Tsiferana RandriatianaL’article Fibatana fonjamby: medaly volamena valo ho an’ny Malagasy a été récupéré chez Newsmada.
Nandray ny fahefany maha filohan’ny Banky iraisam-pirenena (BM) azy i David Malpass, ny 9 avrily teo. Fitsidihana voalohany hataony amin’izay andraikiny izay ny firenena telo aty Afrika, ny 29 avrily hatramin’ny 3 mey ka anisany i Madagasikara, ny 29 avrily ho avy izao hatramin’ny 3 mey. Ho atsy Etiopia izy mialoha ny ahatongavany eto amintsika ary hitohy any Mozambika avy eo.Fijerena ifotony ny fiaraha-miasan’ny Banky iraisam-pirenena sy Afrika ity fitsidihana voalohany ataon’i David Malpass ity. Anisan’izany ny fampiroboroboana ny hahamarin-toerana ny toekarena aty Afrika sy ny fanamafisana ny fiatrehana ny tranga samihafa. Eo koa ny fanampiana ny firenena tena mahantra, toa an’i Madagasikara, fahadimy mahantra indrindra maneran-tany amin’ny alalan’ny Fikambanana iraisam-pirenena ho an’ny fampandrosoana (Ida). Hojerena koa ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra tsy miankina mba hiteraka fampiasam-bola sy loharanon-karena, hitondra tombontsoa ho an’ny vahoaka, mba tena hisian’ny fampandrosoana.Mafy sy sarotra ny fanambin’ny mpitondraHotsidihin’i David Malpass ireo fandaharanasa sy tetikasa vatsin’ny Banky iraisam-pirenena vola. Any Mozambika, hojereny ifotony ny tanànan’i Beira, anisan’ny tena potiky ny rivodoza Idai, ny marsa 2019 teo.Nambarany fa “tena maika ny asan’ny Banky iraisam-pirenena manomboka izao hatramin’ny taona 2030 satria miaina anaty fahantrana avokoa ny olona sivy amin’ny folo (9/10) aty Afrika tapany atsimo. Nosafidiko manokana ny any Afrika hotsidihiko voalohany, amin’izao maha filoha ny Banky iraisam-pirenena ahy izao, satria tsapako fa maro sady sarotra ny fanamby miandry ireo mpitondra fanjakana, hisian’ny fitomboana toekarena, ny fandriampahalemana, ny fanjakana tsara tantana”.Njaka AndriantefiarinesyL’article Banky Iraisam-pirenena: ho avy eto Madagasikara ny filoha vaovao D.Malpass a été récupéré chez Newsmada.
Noderaina manokana na tsy izy rehetra aza. Nitondra ny fahitany sy ny fanaraha-maso nialoha sy nandritra ary ny aty aorian’ny fifidianana ny komitin’ny Dina nampanasoniavina ireo kandidà. Nisy noderaina manokana ireo mpilatsaka hofidina. « Mankasitraka tanteraka ny kandida isany: Rabary Andrianiaina Paul, Radilofe Mamy Richard , Rasolofondraosolo Zafimahaleo na i Dama, Beriziky Jean Omer, i Zafivao Jean Louis sy i Tabera Randriamanantsoa izahay satria nampiseho mangarahara tsara izy ireo momba ny famatsiam-bolan’ny fampielezan-kevitra », hoy ny fanambaran’ny komitin’ny Dina nampanao sonia ireo kandidà tamin’izao fifidianana filoham-pirenena izao. Nanterin’ny fanambarana fa voalohany izany mangarahara momba ny famatsiam-bolan’ny kandidà teto amintsika izany. « Mendrika atao ohatra izy ireo ka haharitra io fomba fanao tsara io. Fantatsika fa tombontsoa lehibe ho an’ny firenena izany », hoy ihany izy ireo. Nankasitrahan’ny komity manokana koa ny fanetren-tena sy ny fiandaniana amin’ny filaminana asehon’ny kandidà Rabary Paul, nanaiky ny vato azony raha vao nanomboka ny fanisam-bato. “Nanentana ireo kandidà mpifaninana aminy izy hanaiky ny voka-pifidianana ary tsy ho tompon’andraikitra hiteraka korontana, hampitondra faisana indray ny firenentsika”, hoy ihany izy ireo. Niaiky koa anefa ity komitin’ny Dina ity fa niseho ny tsy fahatomombanana maro araka ny hita, ny zava-nitranga voatatitra, ny fahasorenana, ny fitarainana teo amin’ny mpandray anjara tamin’ny fifidianan sasany. “Tratrantsika ny fanamby amin’ny ankapobeny ary tao anatin’ny fitoniana azo ekena izany”, hoy izy ireo. Miantso ny kandidà hanaja ireo mpifidy Ankoatra izany, miantso ny rehetra ho tony eo am-piandrasana valim-pifidianana fihodinana voalohany izy ireo. Mba hosorohina amin’ny fomba rehetra ny fihantsiana sy ny fanoherana, mety hiteraka krizy vaovao. Miantso ireo kandidà 36 mba hanaja ny vahoaka malagasy sy ny mpifidy ny komitin’ny Dina. “Tokony hitsahatra avy hatrany ireo fanodikondinana saim-bahoaka momba ireo mety ho tsy fahalavorariana tamin’ny fikarakarana fifidianana. Nanana fahafahana nametraka delege isaky ny biraom-pifidianana ireo kandidà ka tokony hanana PV. Tokony ho tsapan’ny kandidà fa tsy mihodina eo amin’ny tenan’izy ireo ihany ny fifidianana fa lokan’ady goavana ho an’ny Malagasy manontolo. Aoka izy ireo hanatsahatra izay mety ho fikasana hanao sorona ny vahoaka noho ny fitiavan-tena sy ny tanjona politikany avy”, hoy izy ireo. Tsy hampidi-kizo indray ny firenena Nentanin’izy ireo ireo mpisehatra rehetra amin’ny fanajana ny lalàna sy ny fanaovana fitoriana araka ny voalazan’ny lalàna. “Aoka isika rehetra ao amin’ny andraikitra misy antsika avy, ho olom-pirenena hivoy filaminana sy demokrasia fa tsy ho tompon’andraikitra hampiditra ny firenena ao anaty ny kizo indray ka tsy ho tafarina intsony isika”, hoy izy ireo. Tsiahivina fa anisan’ny ao anatin’ny komitin’ny Dina ny CFM, ireo fiarahamonim-pirenena, ny Ceni, ny CNIDH, ny Samifin, ny Bianco, ny HCDDED, Justice et Paix… Randria
Resin-tory ny mpamily ilay Sprinter…: Tapa-tongotra, tapa-tanana, vaky loha ireo mpandeha
Hatramin’ny ora farany nanoratana, omaly halina, tsy nisy ny aina nafoy tamin’ity lozam-pifamoivoizana nahatsiravina, nitranga tao Ambatolaona (RN 2), omaly vao marainabe, ity. Na izany aza, nisy ireo naratra mafy (tapa-tongotra, vaky loha…). Korontam-by sisa ilay Sprinter namoa-doza.Io sahady àry! Korontam-by toy izao sisa (jereo amin’ny sary) niafaran’ity taksiborosy iray tra-doza vao maraina teo amin’ny fiolanana ao Ambatolaona RN2, omaly tamin’ny 4 ora sy 30 mn. Taksiborosy iray avy any Fenoarivo Atsinanana hiakatra aty an-dRenivohitra no tratran’ny lozam-piarakodia ta­m­poka rehefa tsy nahafehy intsony ny familiana ny mpamily. Resin-tory tampoka teo ambony familiana nefa nandeha mafy ny fiara ka niafara tamin’izao loza mahatsiravina izao, araka ny fanazavan’ny zandary ao Ambatolaona. Nandeha mafy ny fiara ka nidona tany amin’ny sisiny avy any amin’ny mpamily ilay fiara ka nifatratra tamina fiara iray nijanona teo amin’ny sisin-dalana eo Am­ba­to­laona. Vokany, naratra mafy ireo mpandeha miisa 10 tao anaty fiara (dimy vehivavy, dimy lehilahy). Henjana ny fifandonana satria potipotika tsy nisy noraisina intsony ilay taksiborosy. Tapa-tanana ama­n-tongotra koa ny ankamaroan’ireo mpandeha tao anaty fiara, ankoatra ny mpandeha iray tena voa mafy satria vaky loha. Mpandeha dimy notsaboina aty an-dRenivohitra… Tonga teny an-toerana namoaka ireo naratra avy ao anaty fiara ny zandary ao Ambatolaona ka ireo fiara sendra nandalo no nosakanan’ny zandary nandefasana ireo maratra nihazo ny hopitalin’i Manjakandriana. Nony tonga tao Manjakandriana, tsy vita tao ny fitsaboana ireo dimy tena voa mafy fa tsy maintsy nakarina aty an-dRenivohitra noho ny ratra mafy nahazo azy. Mialoha izany anefa, efa noraisina avokoa ny mombamomba azy ireo hahafahana manohy ny fanadihadiana rehetra aorian’ny fitsaboana azy ireo. Isan’ireo naratra ihany koa ny mpamilin’ilay taksiborosy. Vao manomboka misokatra ny lalana dia loza amoizana ain’olona sy/na andratrana olona toy izao sahady no mitranga eny amin’ny lalam-pirenena raha somary nangingina kely izany nandritra ny fihibohana.Jean ClaudeL’article Resin-tory ny mpamily ilay Sprinter…: Tapa-tongotra, tapa-tanana, vaky loha ireo mpandeha a été récupéré chez Newsmada.